အင်း - မန္တလေး | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
အင်း (အင်းဝသို့မဟုတ်အင်းဝသို့မဟုတ် Awa-Cuaiquer) မြို့နယ်မန္တလေးတော်ဝင်နန်းတော်၏ 18Km တောင်ပိုင်းအကြောင်း. ဒါဟာအကြားငါးကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံ on-နောက်တဖန်ချွတ်-နောက်တဖန်တော်ဝင်မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည် 1360 သို့ 1840 အေဒီ. ကွဲပြားခြားနားသောရှငျဘုရငျတို့ရံဖန်ရံခါအိမ်နီးချင်းပြည်နယ်များအားဖြင့်ကျူးကျော်များနှင့်မြို့တော်တစ်ဦးသည်အချိန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ရသည်စစ်ကိုင်းနှင့်အမရပူရဒါမှမဟုတ်ဧရိယာများကဲ့သို့သောနေရာများမှတခြားနေရာတော်ဝင်မြို့တော်ရွှေ့မယ်လို့.
အင်း (အင်း) ဧရာဝတီ၏လမ်းဆုံတောင်ပိုင်းခြမ်းပေါ်မှာထိုင် (ဧရာဝတီ) နှင့် Myitnge မြစ်ချောင်းများ. အဆိုပါနှစ်ဦးကိုမြစ်တို့သည်တစ်ချိန်ကမြို့တော်၏အကြမ်းဖျင်းမြောက်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ပိုင်းအနားဖွဲ့စည်း.
အလုပျသမားတစ်ဦးသည်လူအပေါ်တစ်ဦး rectuangular နန်းတော်ဧရိယာကိုဖွဲ့စည်းရန်ကြီးမားတဲ့ခိုင်ခံ့သောမြို့ရိုးကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်တောင်ပိုင်းနှင့်နှစ်ခုကိုမြစ်များဆက်သွယ်ထားသောဧရိယာ၏အနောက်တိုင်းနှစ်ဖက်တစ်လျှောက်ကျုံးတူးမြောင်းကိုတူးခဲ့တဲ့အစောပိုင်းရှငျဘုရငျတို့တစ်ခုမှာနည်းနည်းကျွန်းလုပ်. သူတို့ကနန်းတော်ခိုင်ခိုင်လုံလုံပြင်ပတွင်နေသောဒေသခံရွာသူရွာသားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တောင်နှင့်အနောက်တဖန်အများအပြားကီလိုမီတာမြို့တော်ပြင်ပရှိတစ်ဦးအကှေ့အကောကျမွို့ရိုးကိုတညျဆောကျကြောင်းပြီးနောက်.
ယနေ့နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကလုနီးပါးတူကြည့်သကဲ့သို့သင်တို့အင်းတွေ့နိုင်ပါသည်အထက်တွင်မြေပုံတွင် 200 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. အဆိုပါလက်ရေးဆွဲမြေပုံမှဖြစ်ပါသည် 1907 စာအုပ်ခေါင်းစဉ် “မန္တလေးနှင့်မြန်မာပြည်အတိတ်၏အခြားမြို့များ” သောရေးဆွဲအင်း၏မြေပုံပါရှိသည် 1827.
ရှေးဟောင်းမြို့အများစုကပျက်စီးခဲ့သည် 1838 တစ်နိုင်ငံလုံးတစ်လျှောက်လုံးအဓိကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေသည့်မြေငလျင်. လှည့်ပတ် 1840 တော်ဝင်မြို့တော်ပိုမိုလုံခြုံဖြစ်ထင်ခဲ့သည့်အမရပူရသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်.
မှာရှေးခေတ်မြင်ကွင်းများကိုမြင်နှစ်ခုကိုအဓိကဒေသများရှိပါတယ် အင်း, တစ်ချိန်ကမြို့တော်အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပ –
မြို့တော်ပြင်ပရှိ, နန်းတော်နံရံများအတွက်ရှေးဟောင်းမြို့တံခါးတို့ကိုအချို့ကိုဖြတ်သန်း –
(အုပ်စုတစ်စု – Wingaba ကျောင်းတိုက်, မြင့်မိုတောင်စေတီတော်, Lawka Dawtha က Man အောင်စေတီတော် & ကျောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းအိပျ)
ခရီးသွားများအတွက်အင်းဖို့နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိ (အင်း) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသင့်ရဲ့ mode ကိုပေါ် မူတည်.. အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်း Myitnge မြစ်မှစစ်ကိုင်းတံတားအတိတ်မန္တလေးမြို့ကနေကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားများကဆင်းသွားလာရန်ဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာသင်တစ်ဦးအပြန်ကူးတို့လှေလက်မှတ်များအတွက် 1,200K ပေးဆောင်. ကူးတို့အကြောင်းကိုတိုင်းကို run 15 မိနစ်. ဒေသခံကူးတို့သငျသညျအင်းကူးရေတိုခရီးစဉ်ကြာ.
သငျသညျအများအပြားကဖေးများနှင့် souvenier စျေးဆိုင်များနှင့်ရှေးဟောင်းက်ဘ်ဆိုက်များန်းကျင်နာရီပေါင်းများစွာအဘို့အသငျသညျယူဆန္ဒရှိဒေသခံမြင်းလှည်းယာဉ်မောင်းများစွာနှင့်အတူအနည်းငယ်ရွာမှာပေါ်ကိုဆင်းသက်. မြင်းလှည်းစီးများအတွက်ကုန်ကျစရိတ် 10-12,000K ဖြစ်ပါသည်.
အများစုမှာမြင်းလှည်းယာဉ်မောင်းနှင့် ပတ်သက်. လေးဆိုဒ်များတစ် set ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်ယူပါလိမ့်မယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ Bagaya Manastery, ရတနာ Hsemee စေတီတော် Complex, Nanmyin ကင်းမျှော်စင်နှင့်မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်. သငျသညျတစ်နေရာရာတိကျတဲ့ကိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပယ်ဦးမတိုင်မှီသင်မောင်းသူနှင့်အတူကထွက်အလုပ်လုပ်သေချာအောင်.
တနည်းသငျသညျကားဖြင့်ခရီးသွားလာခြင်းသို့မဟုတ်မန္တလေးကိုဆင်း motorbike နိုင်ပါတယ် – ရန်ကုန်အဝေးပြေးနှင့်သင်တောင်ပိုင်းအင်းများ၏တံတားဖြတ်ကူးပြီးနောက်ကြီးမားသောအဝိုင်းမှာဖွင့်. ဒီကနေသင်တို့ကိုအင်းမှမြောက်အမေရိကတိုတောင်းတဲ့အကွာအဝေးခရီးသွားလာ. ဒီလမ်းကြောင်းကိုသွားနေဖြင့်သင်တို့ရှိသမျှကိုအများဆုံးလည်ပတ်ခဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအတွက်ယူပေါင်းသူတို့အင်းအပြင်ဘက်ဝေးလွန်းဖြစ်ကြသည်အဖြစ်မြင်းလှည်းများကသွားရောက်ကြည့်ရှုဘယ်တော့မှဖြစ်ကြောင်း Le Htat ကြီး Paya တူသောတချို့နေရာတွေမှာကြည့်ဖို့ ပို. နယ်ပယ်များ.
သင်အင်းမှတစ်နေ့လျှင်ခရီးစဉ်ကိုတွေ့လိမ့်မည် go ဘယ်ဟာကိုလမ်း (အင်း) အလွန်ပျော်စရာအတွေ့အကြုံကဖြစ်.